रौतहटमा माओवादी उम्मेदवारको फाइल गायव ! | Radio Langtang 90.3 Mhz
रौतहटमा माओवादी उम्मेदवारको फाइल गायव !
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा मनोनयन दर्ताको लागि बुझाइएको एक उम्मेदवारको फाइल गायब भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रमोद पासवानको फाइल हराएको हो ।
मनोनयनका क्रममा अबेर रातिसम्म लाइन बसेर उम्मेदवारी दस्तुरको रसिद समेत काटेका पासवानको फाइल नभेटिएपछि सो विवाद भएको छ ।
पासवानले आफूले फाइल बुझाएको तर निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीहरुले नियतवश फाइल लुकाएको आरोप लगाएका छन् । उम्मेदवारको फाइल हराएपछि माओवादी कार्यकर्ताहरुले विजयपुरमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय घेराउ समेत गरे ।
यता निर्वाचन अधिकृत धर्मअवतार कोइरालाले उम्मेदवारले फाइल नबुझाएको दाबी गरेका छन् । उनले निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै फाइल सम्बन्धी विवादबारे पत्राचार गरेर जानकारी गराएको बताएका छन् ।
प्रमुख पदमा २६६ जना उम्मेदवार
स्थानीय तहको निर्वाचनमा रौतहटमा झण्डै चार हजार उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । रौतहटका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका मध्ये मौलापुर नगरपालिकाको उम्मेदवारको अन्तिम तथ्यांक भने प्राप्त नभएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
रौतहटमा कुल १८ स्थानीय तहका लागि २६६ जनाले मेयर पदका लागि र १५४ जनाले उपमेयरमा पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैगरी ८७६ जनाले वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
जिल्लामा हालसम्म ३ हजार ८०५ जनाको उम्मेदवारी परेको तथ्यांक प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । बिहीबार बिहानसम्म पनि जिल्लाका केही स्थानहरुमा मनोनयनको कार्य जारी थियो ।
रौतहट सदरमुकामसमेत रहेको गौर नगरपालिकामा १७ जनाले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । सबैभन्दा बढी गरुडा र वृन्दावन नगरपालिकामा २४-२४ जनाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी परेको छ ।
यसैगरी राजपुर नगरपालिकामा २१, माधवनारायण नगरपालिकामा २०, कटहरीया नगरपालिकामा १७ र गढीमाई नगरपालिकामा १६ जनाले प्रमुख पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएका निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । परोहा नगरपालिकामा र बौधिमाई नगरपालिकामा १४-१४, राजदेवी नगरपालिकामा १३ तथा देवाही गोनाही, चन्द्रपुर र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा १२-१२ जनाले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
गुजरा नगरपालिकामा ११ र ईशनाथ नगरपालिकामा ११ जना उम्मेदवारले प्रमुख पदका लागि मनोनयन दर्ता गराएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी दुर्गा भगवति गाउँपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकामा १४-१४ जनाले अध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
रसुवागढीमा लक्ष्य भन्दा वढि राजश्व संकलन
विद्युत् चोरीको गिरोह भत्काउन एकैपटक २४ सय कर्मचारी सरुवा, कुलमानको कार्यकक्ष घेराउ
१२ माघ, काठमाडौं । लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका २ हजार ४ सय ८० कर्मचारीहरुको एक ...
निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह
काठमाण्डौ मंसिर १६, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्न राजनितिक दलहरुलाई फेरी पनि आग्रह गरेको छ पहिलो चरणको चुनाब देखि नै निर्वाचन ...